GMM oo ku baaqay in Farmaajo laga hor istaago musharaxnimada | KEYDMEDIA ONLINE
GMM oo ku baaqay in Farmaajo laga hor istaago musharaxnimada
Golaha Midawga Musharrixiinta, oo aan dhawaanahaan codkooda la maqal ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu ku kacay khiyaano qaran, waxayna umadda Soomaaliyeed ugu baaqeen in Farmaajo laga hor istaago u istaagidda xil qaran.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midawga Musharrixiinta ayaa ku baaqay in Farmaajo laga hor istaago inuu u tartamo xilka Madaxweynaha Soomaaliya, iyo inuu mar kale qabto xil umadaeed, maadaana uu ku kacay khiyaano qaran, sida ay hadalka u dhigeen.
Golaha oo ka hadlay arrinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ah loogu qaaday Eritrea, kadibna loogu sii daabulay Itoobiya, si ay kaga garab dagaallamaan ciidamada Itoobiya, ayaa guud ahaan eedda arrinkaas dusha ka saareen Farmaajo.
Waxa ay ku eedeeyeen inuu khiyaaano qaran ku kacay, dastuurka iyo shaciyada dalka u yaallana baal-maray dan gaar ahna u adeegsaday dhiigga dhallinyaso Soomaaliyeed.
“Waxaan ku baaqeynaa in umadda Soomaaaliyeed ka hor istaagto inuu u tartamo xilka mar kale iyo in laga mamnuuco inuu masuuliyad heer qaran ah mar kale ka qabto dalka”. Ayaa agu yiri warka ka soo baxay Musharrixiinta.
Farmaajo marnaba kama hadlin ciidamada Qaramada Midoobay iyo Maraykanku qireen in lagu arkay gudaha Itoobiya, wuxuu qorsheeyay inuu ka aamuso arrinkaasn inta ay ka dhaceyso doorashada Madaxweynaha ee soo socota.
Guddi uu Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta u xil saaray baaridda cabashada waalidiinta ayaa wali wax howl ah qaban, waxayna u muuqdaan in ay dabool adag sii saarayaaan xaqiiqada kiiskaaas.